Homeसमाचारजुम्ल्याहा जोडी गंगा जमुना: अचम्मको प्रतिभा, अहिले सम्मका जोडी भन्दा फरक (भिडियो सहित)
February 12, 2021 admin समाचार 6403
टिकटवाट भाइरल भए’का धेरै जोडी अहिले कलाकार बनिसकेका छन् । उनीहरुले फिल्म र म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने अ’वसर पाएका छन् । सामाजिक सञ्जा’ल टिकटकले कलाकार बनेकाहरुले राम्रो अवसर पाएका छन् । प्रिन्साको जोडी, दमयन्तीको जोडी र अर्का दुई दाजु’भाईको जोडी पछि अर्को एक दिदी बहिनी पनि भाइ’रल भएका छन् ।
यि पनि जुम्ल्या’हा जोडी हुन् । सामाजिक सञ्जाल टिक’टकमा उनीहरु पनि सकृय छन् । जुम्ल्याहा जोडीहरु भाइ’रल भएका बेलामा यो जोडीले भने कस्तो प्रभाव पार्छ ? हेर्न भने बाँकी छ । उनीहरु पनि अहिले आफु’हरुलाई उनीहरु जस्तै प्रस्तुत गर्ने अवसरको खोजीमा छन् । उनीहरुको अर्को वि’शेषता भनेको उनीहरुले गीत पनि राम्रो गाउँछन् । श्वर पनि ठिकै छ । त्यसैले गीत गाउने प्र’यास पनि गर्छन ।
उनीहरु पनि टिक’टकमा चर्चामा रहेका गंगा जमुना हुन् । उनीहरुले समान लुगा लाउँछन् । भनिन्छ जुम्ल्या’हा मध्य एक जनालाई कुनै समस्या भयो भने अर्कोलाई पनि त्यस्तै समस्या हुन्छ ? यो प्रश्न गर्दा उनीहरुले आफुहरुबीचको रमाइलो कुरा सुनाए । दुई तीन मिनेटको फरकमा जन्मिए’का उनीहरुको स्वभाव पनि उस्तै छ ।
उनीहरुको टि’कटक फलोअर्स ३० हजार भन्दा माथि छ । ब्यक्तिगत र सामु’हिक टिकटक पनि उनीहरुले ब’नाएका छन् । दुवै जनाले संगै र फरक फरक पनि टिकटक एकाउण्ट ब’नाएका उनीहरुले लोक र आधुनिक गीत गाउँछन् । भन्छन्, एक जनालाई टाउको दुख्दा अर्कोलाई पनि दुख्ने रहेछ । हामीले पनि अनु’भव गरेका छन् । उनीहरु आफैले गीत रचना पनि गर्छन । – इताजा खबरबाट
January 3, 2021 admin समाचार 7592
आफ्नै श्रीमानले भारतमा लगेर बेचे’को घट’ना सार्वजनिक भएको छ । श्रीमानसंग भारत गएकी उनलाई श्रीमानले नै बे’चेर आए पछि उनी भागेर नेपाल आइपुगिन् । श्रीमानले भारतमा अरु पुरुषसंग सम्बन्ध राख्न समेत लगाएको महिलाले बताएकी छन्
March 12, 2021 admin समाचार 5516
May 29, 2021 admin समाचार 5803